Myanmar Daily Mail: မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံကို အင်ဒိုနီးရှားက ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ၊ ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထားရှိနိုင် ၊ ကိုရီးယားဒုက္ခသည်အရေး အစိုးရ တင်းကျပ် ၊ ကိုရီးယားဘာသာ စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ ယခင်နှစ်ထက် စံချိန်တင်ရောင်းရ ၊ ကိုရ
မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံကို အင်ဒိုနီးရှားက ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ၊ ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထားရှိနိုင် ၊ ကိုရီးယားဒုက္ခသည်အရေး အစိုးရ တင်းကျပ် ၊ ကိုရီးယားဘာသာ စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ ယခင်နှစ်ထက် စံချိန်တင်ရောင်းရ ၊ ကိုရ
မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံကို အင်ဒိုနီးရှားက ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ၊
ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထားရှိနိုင် ၊
ကိုရီးယားဒုက္ခသည်အရေး အစိုးရ တင်းကျပ် ၊
ကိုရီးယားဘာသာ စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ ယခင်နှစ်ထက် စံချိန်တင်ရောင်းရ ၊
ကိုရီးယားအလုပ် စာမေးပွဲအောင်တိုင်း မျှော်လင့်လို့မရ ၊
အမျိုးသမီးများ ပါရဂူဘွဲ့ယူဖို့ထက် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ကြိုးစားသင့်ကြောင်း လီကွမ်ယုတိုက်တွန်း ၊
စင်ကာပူဆေးရုံနှစ်ရုံ မိတ်ဆက် ၊
နှစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်း တရုတ်တွေ သတ်သေဖို့ကြိုးစား ၊
မလေးရှားဒုက္ခသည်များ မရေရာ ၊
စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီးအခွန်(Levy) နှုန်းအားရင်းဂစ် (၅၀) တိုးမြှင့်သတ်မှတ် ၊
တရားမ၀င် နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားများပြားမှု နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်
ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထားရှိနိုင်
ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ "ပြည်ပအလုပ်သမားအသက်အာမခံ" ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပင် ထားရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ထားရှိရာတွင် အလုပ်သွားလုပ်မည့် သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများက ထားရှိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "ဒီပြည်ပ အလုပ်သမား အသက် အာမခံဆိုတာမျိုးက ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူး။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေ အတွက်ရော ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေ အတွက်ပါ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အာမခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ" ကို စီစဉ်ပေးထားသော်လည်း ယင်းအာမခံကို ထားရှိသူမှာ မရှိသလောက်ပင် နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အသက်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် မိသားစုအနေနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပြည်ပအလုပ်သမား အာမခံထားရှိမှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် နှစ်သောင်း ငါးထောင် ဖြစ်ကာ သုံးနှစ်အထိ အာမခံထားနိုင်ကြောင်း၊ တစ်နှစ်အတွင်းတွင် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားပါက ကျပ်သိန်းငါးဆယ်အထိ ပေးလျော်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းသေဆုံးမှုတွင် မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့် ရာဇဝတ်မှုဖြင့် သေဆုံးခြင်းများကို အာမခံလျော်ကြးပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
"ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံကို ထားရမယ်လို့ လမ်းညွှန်ထားတာတွေမရှိဘူး။ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမှာပေါ့။ အရင်က အဲဒီအာမခံ လုပ်ဖူးတယ်။ နောက်တော့ ပျက်သွားတယ်" ဟု အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်း များပြားလျက်ရှိကာ ယင်းအာမခံကို အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အလုပ်သမားများအတွက် စီစဉ်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက အလုပ်သမားများနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းရုံးခွဲပေါင်း ၃၈ ခုရှိပြီး အာမခံအမျိုးပေါင်း ၄၆ မျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။
ကိုရီးယားဒုက္ခသည်အရေး အစိုးရ တင်းကျပ်
မြန်မာပြည်ရောက် မြောက်ကိုရီးယား ဒုက္ခသည်များအရေးကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အစိုးရက သဘောထား တင်းမာလာကြောင်း မကြာသေးမီက ၀ီကီလိကဖွင့်ချသည့် အစီရင်ခံစာ တစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက တောင်ကိုရီးယားသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရောက်သွားသော မြောက်ကိုရီးယား ခိုလှုံခွင့် ရှာသူများ (ဓာတ်ပုံ - LIFE)
ထိုအစီရင်ခံစာသည် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံး၏ ဌာနတွင်းပေးစာဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားသံတမန်တဦး၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ပြောကြားချက်များကို အခြေခံ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒုက္ခသည်များ အထိန်းသိမ်းခံနေရပြီး၊ မြန်မာအစိုးရအရာရှိတို့ကလည်း တောင်ကိုရီးယားသံရုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆန်နေသည်၊ မြောက်ကိုရီးယားထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရမှ ထိုဒုက္ခသည်တို့ကို လွှတ်ပေးနိုင်မည်ဟု ပြောသည်" ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားတို့သည် မြန်မာအရာရှိများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းပုံရသည်ဟု သံရုံးအစီအရင်ခံစာတွင် သုံးသပ်ထားသည်။
မြန်မာအစိုးရက ၎င်းတို့ လိုလားသူ မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို လူမြင်ကွင်း အခမ်းအနားများတွင် ရင်းနှီးစွာ နေပြခြင်းဖြင့် ပြသလေ့ရှိသည်ဟုလည်း သုံးသပ်ထားသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးခွဲမှုကို မြောက်ကိုရီးယားက ဖန်တီးခဲ့သောကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားသော်လည်း ၂၀၀၇ တွင် မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ပြန်လည် စတင်ခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယား ဒုက္ခသည်များသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ဖြတ်ပြီး နယ်စပ်မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရသည် ခိုလှုံခွင့်ရှာသူများအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်ကိုရီးယားသံရုံးနှင့် ယခင်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပြည့်ရှိခဲ့ပုံကို ၀ီကီလိပေါက်ကြားမှု အစီရင်ခံစာပါ တောင်ကိုရီးယားသံအဖွဲ့ ဒုတိယအကြီးအကဲ၏ ပြောကြားချက်တွင် တွေ့ရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တောင်ကိုရီးယားသံရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ခိုလှုံခွင့် ယူသူ အရေအတွက်မှာ နှစ်စဉ် ၅၀ ခန့် ရှိကြောင်း၊ သံရုံးက ထုတ်ပေးသည့် ခရီးသွားလက်မှတ်များဖြင့် မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာသွားကြကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ခိုလှုံခွင့်ရှာသူများကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှု ၂ ကြိမ်ရှိကြောင်း၊ အစိုးရက ပထမအမှုတွင် ဖမ်းဆီးထားသူများကို တောင်ကိုရီးယားသံအရာရှိများထံ အပ်နှံလိုက်ကြောင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့စွဲတပ် အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့သို့ မြောက်ကိုရီးယား ၁၉ ဦး ရောက်ရှိလာသည်။ မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးပြီး ရက်များမကြာမီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား သုံးသောင်းမှ ငါးသောင်းအထိ ရှိမည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းထားသည်။
ဆင်းရဲကျပ်တည်းခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခံရခြင်းတို့ကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူ အများအပြားသည် တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သည် တရုတ်ပြည်ရှိ နိုင်ငံတကာသံရုံးများအတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး ခိုလှုံခွင့်တောင်းကြသကဲ့သို့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ ကိုရီးယားသံရုံးများသို့လည်း ဆက်သွယ် ခိုလှုံခွင့် ယူကြသည်။
ခိုလှုံခွင့်ယူမည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သူသည် မြောက်ကိုရီးယား ပြန်လည်ပညာပေးရေးစခန်းတွင် အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံရနိုင်သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ပြန်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏ အစီရင်ခံစာတစောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုရီးယားဘာသာ စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ ယခင်နှစ်ထက် စံချိန်တင်ရောင်းရ
အောက်တိုဘာတွင် ပြုလုပ် မည့် ကိုရီးယားဘာသာစာမေးပွဲ လျှောက်လွှာများကို ယခင်ထက် လျှောက်လွှာ စံချိန်တင်ရောင်းချခဲ့ရ ကြောင်း အစိုးရပြည်ပအလုပ်အ ကိုင်အေဂျင်စီမှ သိရသည်။ "အရင်စာမေးပွဲတုန်းက ၄၉ဝဝ ကျော်ပဲရှိခဲ့တာ။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ၁၂ဝဝဝ ကျော်ဝယ်ကြတယ်။ လူ တွေအရမ်းများလို့ ပထမဆုံးရက် မှာ အ ရောင်းခဏရပ်ခဲ့ရတယ်" ဟု အဆိုပါအေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက သြဂုတ် ၃ဝ ရက်တွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သည့် လျှောက်လွှာ နှင့်ပတ်သက်၍ပြောသည်။ သြဂုတ် ၃ဝ မှ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်အထိ လျှောက်လွှာထုတ် ပေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိဟု သတ်မှတ်ထား သော်လည်း ဝယ်ယူသူ များပြား သောကြောင့် အချိန်တိုးကာ ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့သည်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ "ပထမဆုံးရက်က မနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကနေ ၁ဝ နာရီ ၄၅ မိနစ်အထိ ရောင်းပေးခဲ့ တယ်။ နောက်ရက်တွေကတော့ ပုံမှန် ပြန် ဖြစ်သွားပါတယ်" ဟု ၄င်းကပြောသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အခြား နိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်ပါက လုပ်ခလစာ ပိုရသောကြောင့် လျှောက်လွှာတင် သူများပြားခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်မှလာ ရောက်ကာလျှောက်လွှာဝယ်ယူသူ များလည်း များပြားသည်ဟု သိရသည်။ "လက်ရှိ မှာက ကာတာတို့ ဒူဘိုင်းတို့က လစာမကောင်းကြဘူး လေ။ အဲဒါကြောင့် ကိုရီးယားဘက် ကိုပြုံတိုးလာကြတာ" ဟု လျှောက်လွှာဝယ်ယူခဲ့သူ တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။ ကိုရီးယားဘာသာစာမေးပွဲ ကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နှင့် ၃ဝ ရက်တို့တွင် ပြုလုပ် မည်ဖြစ်သည်။ ယခုစာမေးပွဲသည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်ပြု လုပ်သည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် စာမေး ပွဲကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက် တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုရီးယားအလုပ် စာမေးပွဲအောင်တိုင်း မျှော်လင့်လို့မရ
ကိုရီးယားအလုပ်ရှင်များ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ခေါ်ယူသောစနစ် ဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲအောင် သော်လည်း ကိုရီးယားသွားရောက်ခွင့် မရသူများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း ကိုရီးယား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr. Choi Jung Inက ပြောသည်။
၂ဝဝ၈ခုနှစ် စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများမှ ကိုရီးယားသွားရန် ကျန်ရှိသူ ၉၂ ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၄င်းက ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
"အခြားနိုင်ငံမှာလည်း ဒီစနစ်လုပ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ အခုလိုမျိုးတူညီတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်စာမေးပွဲ လုပ်တဲ့အခါ ကျန်တဲ့သူတွေ ရှိလာဦးမှာပဲ။ ဒီစနစ်ရဲ့ ကြေညာချက်မှာကိုက စာမေးပွဲအောင်ထားသော်လည်း သွားခွင့်ရဖို့ အာမမခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ပါ ပြီးပါပြီ" ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ ထို့အပြင် EPS
စနစ်သည် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၍ အချက်အလက်များ ဖြည့်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြည့်ရန်လိုကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
"ကိုရီးယားမှာ အချက်အလက် တစ်ခုကနေတစ်ခုကို ကူးတဲ့အခါ စက်နဲ့ပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ရေးတဲ့သူက '၆' လို့ ရေးလိုက်ပေမယ့် မင်ကမှိန်လို့ (သို့) လက်ရေး မပီလို့ စက်ကမသိတဲ့စာလုံးမျိုး ဖြစ်သွားရင် စက်က '၅' လို့ ဖတ်သွားတယ်။ အဲဒါမျိုးဆိုရင် ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး" ဟုဆိုသည်။
ကိုရီးယားသွားရန် ကျန်ရှိသူ ၉၂ ဦးတွင် လျှောက်လွှာပြန်ဖြည့်သည့်အခါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကွဲလွဲခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါအချက်နှင့် အောင်လက်မှတ်ပါအချက် များ ကွဲလွဲသူများရှိနေသည်ဟု အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင် စီမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးအောင်က ပြောသည်။
"အရင်အေဂျင်စီမှာ တင်တုန်းကတော့ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ လျှောက်လို့ရတော့ ရေလုပ်ငန်းလို့ တင်ထားတာ။ အခုအေဂျင်စီက ရေလုပ်ငန်းနဲ့ လျှောက်လို့မရတော့ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းလို့ပဲ တင်လိုက်ရတာပေါ့။ အဲဒီမှာ အချက်အလက်တွေ လွဲကုန် တာပဲ" ဟု ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကိုရီးယားသွားရန် ၂ဝဝ၆ ခု နှစ်မှ စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သူ ကိုမြတ်သူအောင်ကလည်း ကိုရီးယားသွားရန် စီစဉ်သူများအနေနှင့် အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက် မစောင့်ရန်နှင့် ကိုရီးယား သွားရမည်ဟု တစ်ထစ်ချ မယုံကြည်ထားရန် အကြံပြုသည်။
ပထမအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာစာမေးပွဲကို ၂ဝဝ၈ စက်တင်ဘာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ စာမေးပွဲ အောင်သူများကို ရွှေအင်းဝ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီက ကိုရီးယားသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ စာမေးပွဲအောင်သူ ၃၅ဝဝ အနက်မှ ၁၂ဝ၁ ဦး ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်ပြီးချိန် တွင် MOU စည်းကမ်းချက် ဘောင်ကျော်သည်ဟု ဆိုကာ ၂ဝဝ၉ နိုဝင် ဘာ ၂၇ ရက်တွင် လုပ်သားခေါ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂ဝ၁ဝ မှစ၍ သွားရန်ကျန်သူများ၏ အလုပ် လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည် လက်ခံခဲ့ပြီး ကိုရီးယားသို့ EPS စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်းကို အစိုးရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျန်သူ ၁၇၇၁ ဦးအနက် ၁၅၃၆ ဦး သွားရောက် ပြီးဖြစ်ပြီး ဆေးမအောင်သူများ၊ အသက်ကျော်သူများနှင့် ရက်လွန် နေထိုင်ဖူးသူများကို ပယ်လိုက်ပါက ၉၂ ဦးကျန်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့၏ အောင်လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယု၏ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိရန် ကြိုးစားနေသည့် ခေတ်ပညာတတ် အမျိုးသမီးများအပေါ် ထားရှိသော သဘောထားကို
အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝေဖန် ပြစ်တင်လိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က နန်ယန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတခုအတွင်း ပါရဂူဘွဲ့ ယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ကျောင်းသူတဦးမှ စင်္ကာပူ နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာတွင် " ပါရဂူဘွဲ့ယူဖို့ အချိန်ဖြုန်း မနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ကြိုးစားပါ၊ မိသားစု ဘ၀က သင့်ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ထက် အရေးပါတယ်၊ ကျနော် မျှော်လင့်တာက ပါရဂူဘွဲ့လည်းရ၊ အိမ်ထောင်ဖက်လည်းရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဘွဲ့လည်းရ၊ ကလေးလည်းရသင့်တယ်လို့ လီကွမ်ယုပြော
လီကွမ်ယု၏ မှတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (Association of women for Action and Research -Aware) မှ ဥက္ကဌ နီကိုးတန်မှ လီကွန်ယု၏ မှတ်ချက်ကို ငြင်းချက်ထုတ်လိုက်ပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး၊ လူငယ်နှင့် အားကစားဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် ယာကို့ Yacob မှ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ကာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများ အပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး Cedaw ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
"ကျားမတန်းတူမှုဟာ စင်္ကာပူရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အဓိက အရေးပါတယ်၊ ကျားမခွဲခြားမှု အပေါ် အခြေမခံတဲ့ တဦးချင်း၏ အရေးပါမှုကို ချဲ့ထွင်ပြီး ဦးစားပေးထား ရမည်" ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
"စင်္ကပူရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိမ်းထားဖို့အတွက် တနှစ်ကို နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ခြောက် သောင်း လိုတယ်၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ဦးရေကို လျော့ချဖို့ အတွက် စင်္ကာပူ မိသားစုတစု ကလေး မွေးနှုန်းက (၁ ဒသမ ၈) သို့မဟုတ် (၂ ဒသမ ၁) ရှိဖို့လိုတယ်" ဟု နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ၀င်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လီကွမ်ယုက မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
Aware ဥက္ကဌ နီကိုးတန်မှ အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး Cedaw ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံအနေဖြင့် " ရှေးရိုးစွဲကို အခြေခံတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆိုတဲ့ အယူအဆကို စင်္ကာပူရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှာ သင့်လျော်သလို ထိန်းညှိဖို့ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း" ပြောဆိုခဲ့သည်။ " လီကွမ်ယုလို သြဇာတိက္ကမ ကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဒီလို မှတ်ချက်မျိုး ပေးတာ လူမှုရေး ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်မှာ အရေးပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ မှတ်ချက်က အမျိုးသမီးဆိုတာ အိမ်ထောင်မှု အလုပ်လုပ်ဖို့ နဲ့ အမျိုးသားရဲ့ တာဝန်က အိမ်ထောင်စုကို ပံ့ပိုးဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဟာ ဒီနေ့ လူမှု အဆင့်အတန်းကို လိုက်မီအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ မိသားစုတွေကို အထင်သေးရာရောက်ကြောင်း" ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိNUH ဆေး—ရုံ နှင့် Tan Tock Seng ဆေးရုံမိတ် ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကို စက်တင် ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က Traders Hotel ၌ Mascots Healthcare မှ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းဆေးရုံတို့ သည် နိုင်ငံ တကာအသိအမှတ်ပြု Joint Commission International (JCI) လက်မှတ်နှင့် ISO လက်မှတ် တို့ရရှိထား ပြီး အထူးကုဌာနပေါင်း ၃ဝ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ အထူးကုဌာနအလိုက် စမ်း သပ်ကုသ မှုရလဒ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့် ကြပ်စစ်ဆေး၍ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်း လျက် ရှိကြောင်း Mascots Healthcare မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ ဆေးရုံကြီးများတွင် ကုသနိုင်သော ရောဂါများမှာ သက် ကြီးပိုင်း ရောဂါများ၊ အထွေထွေခွဲ စိတ်ကုသမှုများ၊ အရေးပေါ်ဆေး ကုသမှုများ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ် မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်း ကြောင်းရောဂါများ၊ နား၊ နှာခေါင်း လည်ချောင်းရောဂါများ၊ မျက်စိ ရောဂါများ၊ အရိုးရောဂါများဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနား တွင် ပရော်ဖက်ဆာဒေါ်သန်းသန်းဆွေက အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး ပရော်ဖက်ဆာ Yim Heng Boon မှ 'Advanced Endoscopic Intervention in Upper GL diseases ' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေး ဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းဆေးရုံကြီးများသို့ သွား ရောက်ကုသလိုပါက MASCOTS Healthcare (မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ)၊ ဖုန်း- ၂၁၈၃၆၉၊ ဝ၉-၇၃၁၆၆၆ဝ၁ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်း တရုတ်တွေ သတ်သေဖို့ကြိုးစား
တရုတ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုနှုန်း အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နှစ်မိနစ်တိုင်းမှာ တစ်ယောက် သတ်သေဖို့ကြိုးစားနေကြောင်း တရုတ်အစိုးရ မီဒီယာမှ တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
တရုတ် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဌာန ပြောဆိုချက်အရ၊ လူ ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) မှာ ၂၂.၂၃ ယောက်နှုန်း မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေနေကြသည်။
ပေကျင်း ကျန်းမာရေးဗျူရို ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မော်ယု က "ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ်သေမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးပါပဲ" ဟု the Beijing Youth Daily သတင်းစာကို ပြောခဲ့သည်။
လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလီယံ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နှစ်စဉ် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သူ ၂၈၇,၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်းနဲ့ တစ်နှစ်ကို လူ ၂ သန်းခန့် သတ်သေဖို့ ကြိုးစားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က တရုတ်ပြည်မှာ 'ကမ္ဘာ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှု ကာကွယ်ရေးနေ့' (World Sucide Prevention Day) ကျင်းပခဲ့ကြောင်း the Beijing Youth Daily သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက် ပေကျင်း ကျန်းမာရေး ဗျူရို ဖော်ပြချက်အရ၊ အသက် ၁၅ နှစ်နဲ့ ၃၄ နှစ် တရုတ်လူငယ်လူရွယ်တွေ ကြားမှာ သတ်သေမှု များပြားကြောင်းနဲ့ သတ်သေခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းက ပညာရေး ဖိအားတွေ များပြားမှု၊ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေမှုတို့ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။
ကျေးလက်နေသူတွေထက် မြို့ပြနေသူတွေက မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှု သုံးဆပိုများပြီး၊ သတ်သေသူ စုစုပေါင်းရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
တရုတ်ပြည် ဈေးကွက်စီးပွားရေး မဖွင့်ခင်က အစိုးရရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုများခဲ့ပြီး၊ ယခု ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖွင့်ပြီးနောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသူ များပြားလာခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဗြိတိသျှ ဆေးပညာဂျာနယ် The Lancet ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ၊ ဖင်လန်၊ လတ်ဗီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ လစ်သူနီးယား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နဲ့ ကာဇက်စတန်တို့မှာ လူတစ်သိန်းကို အယောက် ၂၀ နှုန်း မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
DK-မအောင်မြင်သောသြစတြေးလျ-မလေးရှားဒုက္ခသည်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကဲ့သို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စရပ်များအားအနာဂတ်ကာလတွင်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဒုက္ခသည်များအားတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန် မလေးရှားအစိုးရအား ရှေ့နေများအသင်း (Bar Council)
ဒုက္ခသည်များအားတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုသောကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးများအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် နောက်ကျကျန်ရစ်နေသော နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာရသည်ဟု ဘားကောင်စီ၏အကြီးအကဲဖြစ်သူလင်ချီဝီး (Lim Chee Wee) မှပြောကြားခဲ့သည်။မလေးရှားနိုင်ငံ၏ (၅၄) နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အားကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်သောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည့် မလေးရှား နိုင်ငံသည် ၄င်း၏အရေးကိစ္စရပ်များအားဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံတကာမှလက်ခံထားသည့်စံနှုန်းများ၊ အပြုအမူများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ၄င်းမှဆိုသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူ (၈၀၀) အားမလေးရှားသို့ပို့ဆောင်ရန်ကိစ္စတွင် မလေးရှား နိုင်ငံ၌ ဒုက္ခသည်များအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိသောကြောင့် သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် သြစတြေးလျအထက်တရားရုံးမှ ထိုအစီအစဉ်အား ပယ်ဖျက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ဘားကောင်စီအကြီးအကဲဖြစ်သူလင်ချီဝီးမှ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် (၁၉၂) နိုင်ငံအနက်မှ (၁၉၆၇) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်များ (1967 Protocol) အရဒုက္ခသည်များ၏အဆင့်အတန်းနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၉၅၁) ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာညီလာခံမှ သဘောတူညီချက် (1951 Convention on the Status of Refugees)
အားသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုရသေးသော နိုင်ငံ (၄၅) နိုင်ငံတွင် ပါဝင်နေသည်။
အဆိုပါဒုက္ခသည်လဲလှယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရ သြစတြေးလျမှ ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူ (၈၀၀) အားမလေးရှားသို့ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးမလေးရှားဘက်မှ (UNHCR) ရုံး၏ အသိအမှတ်ပြုခံထားရပြီးသောဒုက္ခသည် (၄၀၀၀) အား ပြန်လည်နေရာချထားရန် သြစတြေးလျမှလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။(၁၉၅၈) သြစတြေးလျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအက်ဥပဒေ (Australian Migration Act – 1958) ၏သတ်မှတ်ချက်အရခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအား သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ အခြားတတိယနိုင်ငံတနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်၍ ၄င်းတို့၏ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသည့် ကိစ္စရပ်များကိုစီစစ်နိုင်ရန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး အားပေးအပ်ထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် အဆိုပါတတိယနိုင်ငံအနေနှင့် ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဥပေဒေကြောင်းအရ နိုင်ငံတကာဥပဒေများ (သို့) ပြည်တွင်းဥပဒေများနှင့် အညီအသိအမှတ်ပြုမှသာအာဏာတည်သည်ဟုသြစတြေးလျအထက်တရားရုံး၏ တရားစီရင် ချက်တွင်ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်ဟုလင်မှဆိုခဲ့သည်။ဆိုလိုသည်မှာ
• ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများ(Asylum Seekers) အားကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန် ၄င်းတို့အားထိရောက်မှုရှိသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်စေခြင်း၊
• ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအားဒုက္ခသည် (Refugees) အဖြစ် အသိအမှတ်အပြုမခံရသေးခင်စပ်ကြားကာလတွင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးအပ်ခြင်း၊
• ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းပေးအပ်ခံထားရသူများအား ပြန်လည်နေရာချထားရန် တတိယနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ (သို့) ၄င်းတို့၏မိခင်နိုင်ငံဆီသို့ ဆန္ဒအလျောက်မပြန်မီကာလအတွင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် တို့ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်အပြင် တတိယနိုင်ငံအနေနှင့် လိုအပ်သော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးအပ်ရန် လိုအပ်သောလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းတရပ် ရှိနေရန်လိုအပ်သည်ဟုသြစတြေးလျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအက်ဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
သို့သော်လည်းမလေးရှားနိုင်ငံအားခိုလှုံသူများကိုပို့ဆောင်နိုင်သောတတိယနိုင်ငံအဖြစ် တရားဝင် ကြေငြာနိုင်ရန် သြစတြေးလျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အက်ဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသော ဒုက္ခသည်များအနေနှင့် လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် ၄င်းတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အချက်များအားမလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဥပဒေကြောင်းအရသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပေ။
လာမည့် (၅၅) နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ မတိုင်မီကာလအတွင်း များစွာသောဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးသဘောတူညီချက်များအားသဘောတူလက်ခံသည့် လိုအပ်သော ဥပဒေများကိုမလေးရှားလွှတ်တော်အနေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည်ဆိုလျှင် အဆိုပါ ဥပဒေများသည် မလေးရှားနိုင်ငံအတွက် ကြီးကျယ်သောမွေးနေ့လက်ဆောင်ကြီးတခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု လင်မှဆိုခဲ့သည်။ထိုအခါမိမိတို့သည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံများအကြားရင်ကော့၊ခေါင်းမော့၍ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားရပ်တည်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းမှပြောကြားခဲ့သည်။ သူရိယသတင်းဂျာနယ်
KHT/ အာဖကန်နစ္စတန်ကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ Akhbarနဲ့ မိသားစုတွေက မလေးရှားမှာ မရေရာမှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရပေ့မယ် အခုတော့ မလေးရှားနဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ သြစတြေးလျမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ် အတွက် အိမ်မက်မက်နေကြပါပြီ။
တကယ်လို့ ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်က မဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးမှာကို မကြောက်ဘဲ သြစတြေးလျကို လှေနဲ့ ခိုးဝင်မယ်လို့ Akhbarကပြောပါတယ်။
အသက် ၃၅နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Akhbar က ပြီးခဲ့တဲ့ လက သြစတြေးလျကနေ ခိုလှုံဖို့ လှေနဲ့ ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည် ၈၀၀ ကို မလေးရှားသို့ ပို့ဆောင်ပြီးတော့ သြစတြေးလျက လာမည့် ၄ နှစ်အတွင်း မလေးရှားက ဒုက္ခသည်လို့ အသိအမှတ်ပြုခံရသူ ၄၀၀၀ ကို လက်ခံပေးမည် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့လည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲတွေ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သြစတြေးလျ တရားရုံးချုပ်က အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်း ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Akhbarလို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ အန္တရာယ်များတဲ့ ရေလမ်းခရီး ဖြစ်ပါစေ သြစတြေးလျလို ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို တရားမ၀င်ခိုးဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ သေသွားရင် ပြဿနာ မရှိပါဘူး၊ ကျနော်တို့ သြစတြေးလျကို ရောက်သွားရင် ကောင်းပါတယ်၊ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့" လို့ Akhbar က တရားမ၀င် ပြည်ပြေးဘ၀နဲ့ စိတ်မချဖွယ်ရာနေရတဲ့ သူဘ၀ကို
သြစတြေးလျမှာ အခြေချ နေထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ဝေးလွန်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွန်းအားနဲ့ အာဖဂန်၊ အီရတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်တွေက အန္တာရယ်များတဲ့ ခရီးစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမှာ အိပ်ခန်း ၂ ခန်းမှာ ဆွေမျိုး ၇ ယောက်နဲ့ အတူနေနေရတဲ့ Akhbarက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က ဒီခရီးကို စတင်ခဲ့တာပါ။ အာဏာပိုင်တွေ ရှာတွေ့သွားမှာကြောက်လို့လည်း နာမည်ဝှက် Akhbarကို သုံးပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ပါသေးတယ်။
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာဖွေနေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင် Pashtun လူများစုရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေက Hazara လူနည်းစု လယ်သမားဖြစ်တဲ့ Akbhaတို့ရဲ ဂျုံစတဲ့ သီးနှံခင်းတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့် အာဖဂန် အလယ်ပိုင်း သူတို့နေထိုင်တဲ့ မြို့လေးကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါ။
"နှစ်တိုင်း စိုက်ပျိုးတဲ့ အချိန်ဆိုရင် သူတို့က ရောက်လာတယ်၊ သူတို့က သူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကို ယူလာတယ်၊ အဲဒီအကောင်တွေက ကျနော်တို့ သီးနှံခင်းက အရာတွေကို အားလုံး စားပစ်လိုက်တော့ ကျနော်တို့အတွက် ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး" လို့ Akhbarက အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။
"ကျနော်တို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့မဟုတ်ရင် မနက်ဖြန်တော့ အသတ်ခံရမှာပါ"လို့လည်း Akhbarက ဆိုပါတယ်။ သူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တောပုန်း ဓားပြလက်ချက်နဲ့ သေကုန်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူကုန်ကူးသူတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ သူနဲ့ သူမိသားစုက ပါကစ္စတန် အီရန် နယ်စပ်တွေ ခိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတယောက်က မလေးရှားမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းက မလေးရှားက
အာဖဂန်အပါအ၀င် တခြား အာရှ နိုင်ငံက အလည်အပတ်သွားတဲ့သူတွေကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာပါ။
လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ လူကုန်ကူးသူတွေအတွက် စုဆောင်းထားတဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ မိသားစု တခုလုံး မလေးရှားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Akhbarရဲ့ ခရီးစဉ်က မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။
မလေးရှား ကွာလာလမ်ပူရောက်တော့ ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမခံရသလို တရားဝင် အလုပ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်း မရရှိပါဘူး။
အလုပ်တခုပြီးတခု ပြောင်းရွှေ့ရင်း တရက်ကို ၁၂ နာရီနဲ့ တလ နားရက် ၂ ရက်ရတဲ့ တရားမ၀င် စားဖိုဆောင် အကူအဖြစ် တလကို မလေးရှား ရင်းဂစ် ၁၂၀၀ ရနေပါတယ်။ တ၀က်ကို နေရေးထိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုရပါတယ်။
တခေက်ကလည်း Akhbarတို့ ညီအကို ၂ ဦးက အလုပ်လုပ်တာကို ဖမ်းမိတဲ့ အတွက် ၁၇ ရက်လောက် ထ်ိန်းသိမ်းခံခဲ့ ရပါတယ်။ ဇနီးနဲ့ ၂ နှစ်အရွယ်ကလေးကတော့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီး နှောင်ယှက်မှုကို ကြောက်တဲ့ အတွက် အခန်းကနေ ဘယ်ကိုမှ မသွားပါဘူး။
အာရှနိုင်ငံတွေကနေ မလေးရှားမှာ တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၂ သန်းလောက်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ၉ သောင်း ကျော်လောက်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည် အများစုက မြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အာဖဂန်လူမျိုး ၅၀၀ လောက်ပါနေပါတယ်။
မလေးရှားကို မလာမီ အာဖဂန် အများစုက အီရန်နိုင်ငံမှာ ပြည်ပြေးဘ၀နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သူတို့တွေက ကွန်ယက်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကို မရရှိဘူးလို့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အဖွဲက Sharuna Verghis က ပြောပါတယ်။
"တရားဝင် သက်သေခံချက်မရှိဘဲ မျိုးဆက်တွေ ပြည်ပမှာ တယောက်ပြီးတယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တယ်၊ သက်သေခံကဒ်၊ အဓိပ္ပာယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ဘ၀တခုလုံးကို မဖြစ်သန်းနိုင်ပါဘူး၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ခံစားချက်က စိတ်ကိုပျံနှံစေတဲ့ လေးနက်တဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်" လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
ရှီးရိတ်ယုံကြည်မှုကို တရားဝင်တားမြစ်ထားသည့် မလေးရှား၌ အာဖဂန် ဒုက္ခသည် အများစုက ရှီးရိတ်များဖြစ်ကြပြီးတော့ ဆွန်နီတွေရဲ့ အထင်သေးအမြင်သေးမှုကို ခံရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တခါတလေ အာဖဂန်က စစ်သွေးကြွ တာလီဘန်နဲ့ မှားပြီးထင်မှတ်တတ်လို့ နေထိုင်ဖို့နဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့လည်း Verghis က ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များကို ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများမှာ ထိန်းသိမ်း အကျဉ်းချထားတာတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်ကို မလေးရှားနဲ့ သြစတြေးလျ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ အဖွဲကလည်း အိမ်နဲ့ တခြား အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သြစတြေးလျနဲ့ မလေးရှား အရာရှိတွေက လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေကို တားဆီးနိုင်ဖို့လို ဆိုနေပေမယ့် လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေကတော့ ဆက်လက်ရောက်လာနေဆဲပါ။
သြစတြေးလျကို ပင်လယ်ခရီးနဲ့သွားရောက်တဲ့သူတွေက အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ နှစ်အတော်ကြာ စိတ်ကသိကအောင်နဲ့ စောင့်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း Akhbar သိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မလေးရှားမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည် ၈၀၀၀ လောက်က သြစတြေးလျကို အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။.
Akhbar၏ သူငယ်ချင်း အတော်များများက ခိုလှုံခွင့်ရရှိခဲ့သလိုပဲ ခနော်ခနဲ့လှေနဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ပင်လယ် ခရီးလမ်းကို ဖြတ်သန်းရတဲ့ အတွက် တချို့က အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။
သူ့မိသားစုအနေနဲ့ အခြေချနေထိုင်ဖို့ စာရင်းထဲမှာ မပါဘူးဆိုရင် တရားမ၀င်သွားရောက်ဖို့ ငွေကြေး လုံလုံလောက်လောက် စုပြီး စွန့်စားဖို့ Akhbarက အသင့်ရှိနေပါပြီ။
"လူသားတွေကိုလေးစားတဲ့နေရာကို ကျနော်သွားပြီး တသက်လုံး အခြေချ နေထိုင်ချင်တယ်" ဟု သူက ပြောသည်။ သူရိယသတင်းဂျာနယ်
စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီးအခွန်(Levy) နှုန်းအားရင်းဂစ် (၅၀) တိုးမြှင့်သတ်မှတ်
DK-စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှစပြီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးတွင်လုပ်ကိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများမှထမ်းဆောင်ရမည့်အခွန် (Levy) အားမူလသတ်မှတ်နှုန်းထားထက်ရင်းဂစ် (၅၀) ထပ်မံတိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုမလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ အတွင်းဝန် တန်ဆရီမာမွတ်အဒမ် (Tan Sri Mahmood Adam) မှပြောကြားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တရပ်တွင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ သုတေသနဋ္ဌာနမှ (ForeignWorkers Laboratory)အဆိုပြုခဲ့သောအဆိုပါအခွန်တိုးမြှင့်ရန်ကိစ္စအား၊ (၂၀၀၅) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အခွန်တိုးမြှင့်မှုနှင့်ချိန်ထိုး၍ အစိုးရမှစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ပြီးနောက် အခွန်တိုးမြှင့်ရန်သဘောတူညီခဲ့သည်ဟုမာမွတ်အဒမ်မှဆိုထားသည်။
သို့သော်လာမည့်စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မတိုင်မီပထမဆုံးအကြိမ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများမှပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ပမာဏသည် မူလအခွန်နှူန်းဟောင်းအတိုင်းသာရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မတိုင်မီတွင်လာရောက်သက်တမ်းတိုးမည့် ဖရီးကောလင်း (Free Calling) ဟုဆိုကြသောယာယီအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ် (Temporary Employment and Visit Passes)အားလုံးကိုလည်းမူလအခွန်နှူန်းဟောင်းအတိုင်းသာကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
(First-time applications for every foreign worker which were submitted to the ministry before Sept 1will remain at the old levy rate and the old rate is also maintained for any renewal applications of Temporary Employment Visit Passes which expire before Sept 1.)
စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်အသစ်လျှောက်ထား (သို့) သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ သက်တမ်းထပ်မံတိုးမည့် ယာယီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်များကိုသာအခွန်နှူန်းထားသစ်များဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုမာမွတ်အဒမ်မှပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နောက်ပိုင်းအခွန်နှူန်းထားသစ်များမှာလယ်ယာကဏ္ဍနှင့် အိမ်တွင်းအကူကဏ္ဍများ (Agriculture and Domestic Sectors) အတွက် ရင်းဂစ် (၄၁၀)၊စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ (Plantation Sector) အတွက် ရင်းဂစ် (၅၉၀)၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍများ (Manufacturing and Construction Sectors) အတွက်ရင်းဂစ် (၁၂၅၀) နှင့် (စားသောက်ဆိုင်/ဟိုတယ်) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ (Service Sector) အတွက် ရင်းဂစ် (၁၈၅၀) အသီးသီးဖြစ်ကြသည်။ (အဆိုပါနှူန်းထားများမှ မလေးရှားကျွန်းဆွယ် (Peninsula) အတွက်သာဖြစ်သည်)
သို့သော်ဆာဘားနှင့်ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်များ (Sabah and Sarawak) တွင်ကောက်ခံမည့် အခွန်နှူန်းသစ်များမှာ မလေးရှားကျွန်းဆွယ်တွင် သတ်မှတ်သည့်အခွန်ပမာဏနှင့်စာလျှင် အတန်ငယ်ကွဲပြားမှုရှိ၍ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍများအတွက်အခွန်ပမာဏမှာရင်းဂစ် (၁၀၁၀) ဖြစ်၍ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ရင်းဂစ် (၁၄၉၀) တိှု့ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းအထိအစိုးရ၏ (6P) အစီအစဉ်အရတရားဝင်နှင့်တရားမဝင်လုပ်သားများစုစုပေါင်း (၂၂၄၈၉၄၀) ဦးတို့အား မလေးရှားနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများနှင့်အစိုးရမှခန့်အပ်သောအေးဂျင့်ကုမ္ပဏီများမှဘိုင်အိုမက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့အနက်မှ (၁၂၄၂၈၁၃) ဦးတို့မှာမလေးရှားနိုင်ငံသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ကြသည်။ သူရိယသတင်းဂျာနယ်
RM50 levy hike for foreign workers from Sept 1
KHT/PETALING JAYA- နိုင်ငံခြားသားများ ကိုယ်ရေးမှတ်ပုံတင် အစီအစဉ်သည် တရားမ၀င်နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားက တရားဝင် နိုင်ငံခြားသား အရေအတွက်ထက် သန်းချီပိုများနေသည်။
ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး Datuk Seri Hishammuddin Husseinက တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသားအရေအတွက် များပြားမှုက နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် အတွက် အစီအစဉ်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားရန် ပြောသည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံခြားသားများ နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နိုင်သည့် နေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် မလေးရှား နိုင်ငံကို အခြေစိုက်၍သော်လည်းကောင်း ကြားခံ၍သော်လည်းကောင်း မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဟု သူက ပြောသည်။
"တရားမ၀င် အလုပ်သမားဦးရေက တရားဝင်ထက် ပိုများနေတာက စိုးရိမ်စရာပါ၊ ဒါပေ့မယ်လည်း 6P အစီအစဉ်က ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်" ဟု Hishammuddin Husseinက ပြောသည်။
မှတ်ပုံတင်အစီအစဉ်ဖြင့် ကောက်ခံနေသည့် အချက်အလက်များက ရဲနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ လူကုန်ကူးမှုတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် သူက ပြောဆိုခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို Babbar Khalsa နိုင်ငံတကာ စစ်သွေးကြွဟု သံသယရှိသူ ၃ ဦးလွဲပြောင်းခဲ့ခြင်း၊ ယခုလ အစောပိုင်းက နိုင်ငံလုံခြုံရေး ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် တရုတ်လူမျိုး ၁၆ ဦး တို့သည့် အစိုးရက ကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အန္တရယ်များကို တိုက်ထုတ်နေသည့် ဥပမာဖြစ်ကြောင်း Hishammuddin Husseinက ဆိုသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်သွေးကြွများကို တိုက်ဖျက်နေသော စစ်ဆင်ရေးများကိုလည်း ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားရန် သူက ပြောသည်။
"လူကုန်ကူးမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ လူထောင်ပေါင်းများစွာ စတေးခဲ့ကြရတယ်၊ နိုင်ငံတကာ လူကုန်ကူးတဲ့ အကျိုးတူအဖွဲ့တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက် မလေးရှားဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်တာကို ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး" ဟု သူက ဆိုသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု အစိုးရကို စွပ်စွဲနေသည့် အတိုက်အခံများကို
"စွပ်စွဲချက်တွေက ကျနော်တို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် အဲဒါတွေကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သူတို့ သတိမထားမိဘူး" ဟု သူက ပြောသည်။
သောကြာနေ့အထိ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ၂ သန်းကျော် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပြီး ၁ သန်းကျော်မှာ တရားမ၀င် အလုပ်သမားများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအစီအစဉ်သည် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပြီး ပြီးဆုံးမည့်ရက်ကို မသိရှိရသေးချေ။
တရားမ၀င် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က သီတင်း ၂ ပတ် ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးရက်ကို ထပ်မံတိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူရိယသတင်းဂျာနယ်
Congratulations! To the 3.5 Million Muslim from 100+ Countries around the world attended the most religious gathering in the history of humankind praising the Oneness of God.
May God (the Most High) rewards you.
အမွေးအမှင်များရိတ်နည်း (ယောက်ျားလေးများအတွက်သာ) ၊ အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာနှစ်ရပ် ၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အယူအဆအလွဲ (၁၂) ချက် ၊ လက်ဖြင့်​ လိင်စိတ်​ဖျော်​ဖြေမှုလွန်ကဲ၍ ဘရာဇီး​လ်ဆယ်​ကျော်သက် ​သေဆုံး​သွား​ ၊ အာရှသားတွေ ဘာကြောင
အမွေးအမှင်များရိတ်နည်း (ယောက်ျားလေးများအတွက်သာ) ၊ အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာနှစ်ရပ် ၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အယ...